TPG: Sanduuqa Teknoolojiyada Kale & Dib -u -Cusboonaysiin I
Mawduuca: Beeraha, Tamarta La cusboonaysiin karo, Biyaha
Ganacsatada ganacsigu waxay ogyihiin in dhulka iyo biyaha ay yihiin ilo dhamaystiran oo warshadaha "qashin-saare" ay qiimo u yeelan karaan. Sanduuqa Maalgashiga ee Beddelka iyo Cusub ee Cusub ayaa raadinaya inay ka soo iibsadaan mawaadiic waawayn ee shirkado cusub oo raacaya hannaankan.
$ 10 milyan; laga soo bilaabo 2014
Maalgelinta hantida gaarka ah ee maalgelinta shirkadaha kuwaas oo ka jawaabaya yaraanta kheyraadka iyo caqabadaha deegaanka oo leh codsiyada cusub ee warshadaha. Waxay diiradda saartaa beeraha, tamarta, iyo walxaha qalabka. TPG waxaa lagu daraa falanqaynta bay'ada, bulshada iyo falanqaynta nidaamka maalgashiga, iyo warbixinnada saamaynta deegaanka ee shirkadaha maalgashiga.
Soo Celinta Dhaqaale: Si aad u qiime badan, qiimuhu wuxuu ku jiraa marxaladda soo iibsiga.
Saamaynta Bulshada & Deegaanka: TPG waxay bixisaa warbixinta saameynta saameynta leh. Shirkadaha maalgelinta waxay bixiyaan badeecooyin iyo adeegyo yareeya biyaha iyo qiiqa gaaska guryaha. Tusaale ahaan, Anuvia's Bacriminta ayaa yaraynaya dufanka nitrogen ee webiyada, durdurrada, iyo biyaha dhulka 50%. Tani waa ujeedada tooska ah ee Barnaamijka Wabiga Mississippi.
210,900 Qiyaastii qiyaaso ah CO CO 2 - hoos u dhigga isku dhafan
McKnight waxay kasbatay fikrado qiimo leh oo ku saabsan tiknoolajiyada soo socda iyo isbeddelada suuqyada laga bilaabo kulanada caadiga ah ee lala yeesho maareeyayaasha maalgalinta Teknolojiyada Kumbuyuutarka. Sanadka 2018 waxaan rajeyneynaa in aan maqalno aragtidooda ku saabsan jiilka xiga ee mustaqbalka iyo kaydinta, suurtagalnimada in suuq geynta deynta ee Maraykanka, iyo tilmaamaha cusub ee Bacriminta beeraha.